Tidal ike ọdụ: àgwà, ojiji na uru | Green Renewables
Portillo nke German | | Ike mmiri
N'ime ụwa nke ume ume ọhụrụ enwere ụfọdụ amara nke ọma dịka ike anyanwụ na ike ikuku na ndị ọzọ amachaghị ama dị ka ike tidal. Ọ bụ ụdị ume ọhụrụ nke na-erite uru n'oké osimiri. Iji mee nke a, ị chọrọ a tidal ike ọdụ nke bụ ebe mgbanwe nke kinetic ike nke eletriki ike tides na-ewere ọnọdụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọdụ ụgbọ mmiri tidal, àgwà ya na ọrụ ya.
1 Ike miri emi
2 Tidal ọdụ ike
2.1 Ndị na-emepụta ihe ugbu a
2.3 Ike ikuku na-agbanwe agbanwe
4 Arụ ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri
Oke osimiri nwere nnukwu ike ike, nke enwere ike ịtụgharị ghọọ ọkụ eletrik site na teknụzụ dị iche iche. N'ime isi mmalite ike mmiri dị ka Institute for Energy Diversification and Saving (IDAE) kọwara, anyị na-ahụ ụdị dị iche iche:
Ike sitere n'oké osimiri: Ọ na-agụnye ijikwa ike kinetic nke oke osimiri na-emepụta ọkụ eletrik.
Ike ifegharị ma ọ bụ ike ifegharị: Ọ bụ iji ike igwe nke ebili mmiri.
Thermal tidal: Ọ dabere na iji ohere dị iche iche nke okpomọkụ dị n'etiti mmiri dị n'elu na oke osimiri. A na-eji mgbanwe ọkụ ọkụ eletrik eme ihe.
Ike tidal ike ma ọ bụ ike tidal ike: Ọ na-adabere n'iji tides eme ihe, mmiri na-asọpụta na mmiri nke oké osimiri, nke sitere n'ike ndọda nke anyanwụ na ọnwa. N'ihi ya, ike nke tides na-agbanwe ghọọ ike eletrik site na mmegharị nke turbine, dị ka ọ dị na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik.
Ike tidal bụ isi iyi ike ọzọ dabere na ijikọ mmiri na-asọpụta na oke osimiri, bụ nke ihe ndọda anyanwụ na ọnwa na-eme. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ ihe okike a na-ahụ anya nke na-enye anyị ohere ịhụ mgbe mmegharị mmiri ndị a ga-enwe ike ịgbanwe ghọọ ọkụ eletrik.
Ọdụdọ ike tidal bụ ebe a na-ahụ igwe kwesịrị ekwesị na-agbanwe ike kinetic nke tides ka ọ bụrụ ike eletrik. Enwere ụzọ dị iche iche iji nweta ike tidal. Anyị ga-ahụ nke ọ bụla n'ime ha na isi akụkụ ha:
Ndị na-emepụta ihe ugbu a
A makwaara dị ka TSG (Tidal Stream Generators), ndị na-emepụta ihe na-eji mmegharị mmiri na-eme ka ike ike ghọọ ọkụ eletrik. Nke a bụ usoro a kacha mara amara. Ụzọ a nke inweta ume ọ na-agụnye ọnụ ala dị ala na mmetụta gburugburu ebe obibi dị ala ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ.
Ihe mgbochi mmiri ndị a na-eji ohere nke ike mmiri nwere ike dị n'etiti enweghị isi n'etiti oke mmiri na oke mmiri. Ha bụ ihe mgbochi na turbines, yiri nnọọ ihe mgbochi mmiri ọdịnala, nke e wuru n'ọnụ ụzọ n'ọnụ mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri. Ọnụ ego a na-eri dị elu ma uru ya adịghị elu. Ụkọ nke ebe dị n'ụwa na-ezute ọnọdụ iji kwado ha na mmetụta gburugburu ebe obibi bụ nnukwu ihe ndọghachi azụ abụọ.
Ike ikuku na-agbanwe agbanwe
Nkà na ụzụ dị na usoro ihe ọmụma. A makwaara dị ka DTP (Dynamic Tidal Power), ọ na-ejikọta abụọ mbụ, na-erigbu mmekọrịta dị n'etiti ike kinetic na ike na mmiri mmiri. Usoro a nwere usoro nke nnukwu mmiri mmiri na-eme ka usoro mmiri dị iche iche na-eme ka mmiri dị iche iche chịkọta turbines na-emepụta ike ya.
Anyị na-ekwusi ike na ike ọzọ a nwere ọtụtụ uru:
Ọ bụ isi iyi ike dị ọcha nke na-adịghị emepụta gas na-ekpo ọkụ ma ọ bụ mmetọ ndị ọzọ sitere na ụdị ike ndị ọzọ.
A naghị eji mmanụ ọzọ eme ihe.
Ike na-aga n'ihu na nke a pụrụ ịdabere na ya.
Tides na-enweghị ike ọgwụgwụ ma dị mfe ịkọ.
Ọ bụ isi iyi ume ọhụrụ.
N'agbanyeghị nnukwu ike, iji ike tidal na-enwekwa ọghọm, gụnyere:
Enwere ike nweta nke a site na itinye ego buru ibu. Ọ dị oke ọnụ iji wụnye.
Ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ọhụụ na odida obodo n'ụsọ oké osimiri, ịbụ otu n'ime ihe ndọghachi azụ na-akpata nchegbu nke ike tidal.
Ike tidal abụghị nhọrọ kacha mma maka mpaghara mpaghara niile. N’ihi na ọ̀tụ̀tụ̀ ume anyị pụrụ inweta na-adabere n’ókè nke ijegharị nke oké osimiri na ike nke ebili mmiri.
Ike tidal ike A na-eji ya na-emepụta ọkụ eletrik kemgbe afọ 1960. Obodo ọsụ ụzọ bụ France, onye ụlọ ọrụ na-enye ike na Lens ka na-arụ ọrụ.
Mba ndị nwere ikike imepụta ike nke mmiri ugbu a bụ: South Korea, France, Canada, United Kingdom na Norway sochiri ya. Ka ọ dị ugbu a, ike tidal na-anọchi anya naanị obere akụkụ nke ike mmeghari ohuru nke ụwa, mana ikike ya dị ukwuu.
Arụ ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri
Ebe a na-eme ka ike nke mmiri mmiri na-emepụta ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. Iji jiri ya mee ihe, a na-ewu dams na turbines n'akụkụ ala. n'ozuzu n'ọnụ osimiri ma ọ bụ n'ọnụ mmiri. Mmiri mmiri na-emepụta site na owuwu nke dam na-ejupụta ma na-ekpochapụ na mmegharị ọ bụla nke tide na ụzọ mmiri ọ na-emepụta, na-ekwe ka ịmalite ịmalite turbines na-emepụta ọkụ eletrik.
Kedu ka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-eme ka mmiri na-eme ka ọ bụrụ ọkụ eletrik? Iji zaa ajụjụ a, ọ dị mkpa ịtụle ụkpụrụ nke ike na kinetic ike nke ahụkarị na-abawanye na mbelata na tides na-emepụta site na ndọda mmekọrịta nke anyanwụ na ọnwa. A na-akpọ ịrị elu nke mmiri mmiri, na oge ọdịda dị mkpụmkpụ karịa nke gara aga.
Ọdịiche dị n'ogo dị n'etiti oke osimiri na ọkwa nke ọdọ mmiri bụ isi, ya mere, dị ka Institute for Diversification and Conservation of Energies (IDAE) si kwuo, ọ bụ naanị uru na ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri ebe ịdị elu nke oke mmiri na ala. dị iche site na ihe karịrị 5 mita dabere na ntinye nke njirimara ndị a. Enwere ike izute ọnọdụ ndị a naanị n'ọtụtụ ebe dị n'ụwa. N'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-agbanwe ọkụ eletrik site na turbines ma ọ bụ ndị ọzọ. Site na ntụgharị nke eriri ya na mgbasa nke mmiri n'onwe ya, a na-emepụta ike eletrik.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ọdụ ụgbọ mmiri na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmiri » Tidal ọdụ ike